I-China Adhesive Silicone yekhiphedi yefekthri ye-Bluetooth Somlomo nabahlinzeki | UJin Weitai
Izinkinobho ze-Elastomeric zilungele noma yiluphi uhlelo lokusebenza oludinga ukungena kwesixhumi sedatha. Zingahlanganiswa kalula kumiklamo emisha noma ekhona, ngenkathi zinikela ngentengo ephansi yeyunithi kunemikhiqizo evamile yokushintsha. Izinkinobho zethu ze-elastomeric zinezimpendulo ezinhle kakhulu ezibukeka kahle kanye nokugqokwa okukhethekile okwenziwe ngentando, imibala, osayizi, nobume bezikhiye. Impilo yabo ende nokumelana nokushisa okuphezulu kuzokunikeza iminyaka yokusebenza ngaphandle kwezinkinga. Indawo yemibala eyodwa noma eminingi ...
Izinkinobho ze-Elastomeric zilungele noma yiluphi uhlelo lokusebenza oludinga ukungena kwesixhumi sedatha. Zingahlanganiswa kalula kumiklamo emisha noma ekhona, ngenkathi zinikela ngentengo ephansi yeyunithi kunemikhiqizo evamile yokushintsha. Izinkinobho zethu ze-elastomeric zinezimpendulo ezinhle kakhulu ezibukeka kahle kanye nokugqokwa okukhethekile okwenziwe ngentando, imibala, osayizi, nobume bezikhiye. Impilo yabo ende nokumelana nokushisa okuphezulu kuzokunikeza iminyaka yokusebenza ngaphandle kwezinkinga.
Indawo eyodwa yombala noma eminingi
I-Fluorescent, ama-anti-microbial finishing
Ukufakwa kwamaphilisi okuhambisa
Ukukhanyisela emuva: Ama-LED, i-EL, i-fiber-Optics, ifilimu lomhlahlandlela wokukhanya
Esedlule: Rubber Bass Somlomo
Olandelayo: Ikhiphedi yeRobber
Ikhiphedi yeSilicone Yokulawula Okukude
Sula i-Silicone Gasket
Izingxenye ezibunjiwe ze-silicone ezibandayo
Izingxenye zePulasitiki nezeSilicone